Waaberi oo laga diiday in uu furo iskuul islaami ah | Somaliska
Mudanaha Soomaaliga ah ee ka tirsan baarlamaanka Sweden C/risaaq Waaberi ayaa laga diiday in uu iskuul islaami ah ka furo magaalada Eskilstuna ee gobolka Sodermanland. Cod aqlabiyad ah ayay ku diideen xisbiyada ku jira maamulka Kamuunka Eskilstuna codsiga Waaberi marka laga reebo xisbiga Folkpartiet.
Diidmada ayaa sabab looga dhigay in aan la dooneyn iskuul privat ah oo diin ku saleysan. Qorshaha iskuulka ayaa ahaa in ay dhigtaan 140 arday oo isugu jira xanaano ilaa fasalka 6-aad oo uu noqdo iskuul islaami ah.
C/Risaaq Waaberi ayaa baarlamaanka Sweden soo galay doorashadii sanadkii la soo dhaafay isagoo ka mid ah xisbiga talada haya ee Moderaterna.